We She Me: သိပ္ပံနည်းကျ အိမ်ထောင်သည်ဘ၀
sin dan lar - 6/22/09, 12:14 AM
MrDBA - 6/22/09, 12:46 AM
ဟုတ်ပ။ မှတ်ကရော။ အဟေး .. စာမရေးတာကြာလို့ ဆေးစာအုပ်များ အပင်ပန်းခံပြီး ပြန်ရိုက်ပြတော့မှာလားလို့။ ခွိ။
Phyo Maw - 6/22/09, 1:34 AM
ဒါကြောင့် မားသားက ခဏခဏပြောတာဖြစ်မယ်
နင်အဖေ ဖြစ်မှသိမယ် တဲ့ ဟိဟိ
ကိုရင်နော် - 6/22/09, 1:38 AM
“ကိုကို့ လက်မောင်းပေါ်မှာ အိပ်ချင်လိုက်တာ” လို့ ပြောလို့ကတော့ ဒီပိုစ့် လာဖတ်ခိုင်းလိုက်မယ်..း)
Anonymous - 6/22/09, 1:54 AM
ဩော်။ ဂလို ဂလို ကိုး။ ရုပ်ရှင်တွေ ကြည့်ပြီးရင် တွေးမိတော့မှာပဲဗျာ။ :D
Rita - 6/22/09, 2:26 AM
နုသွဲ့ - 6/22/09, 2:44 AM
သြော် ဟော် ဟော် .... အပြောကောင်းပဲး)
Shinlay - 6/22/09, 2:46 AM
ကျမတို့ ကတစ်ယောက်ဆီခွဲ အိပ်တယ်။ တခါတခါ အတူတူ အိပ်ရင်
ကောင်းမလားလို့ တွေးမိတယ်။ ကျမအမျိုးသားကတော့ လုံးဝ ၂ယောက်
မအိပ်တတ်ဘူး။ ကြည့်ရတာ သူလည်း ကို Andy ပြောသလို reasonတွေ
ပြမယ်ထင်တယ်။ Ko Andy ရဲ့Post ကိုပြန်ပြောပြလိုက်မယ်။
Pls say Hello to your Children and. esp. Thar lay.
we all like him. Take care.
Heartmuseum - 6/22/09, 2:53 AM
ခေါင်းစဉ်ကြီး ဖတ်ပြီး.... လန့်ထှာဗျာ..... :D
ကံကောင်းလို့များ အိမ်ထောင်ရက်သား ကျရင် သုံးဖို့ မှတ်သွားပါတယ်။
Shinlay - 6/22/09, 2:56 AM
this is ko ko maung
i am the husband of shwe shinlay
glad to hear about your post on the reality
of sound sleep habits
my poor shinlay is suffering because she missing "petta", so jezutumbade, good to hear that others
also prefer to sleep alone, sadhu sadhu sadhu
juneone - 6/22/09, 11:01 AM
ကူးကူး - 6/22/09, 1:40 PM
ယောက်ျားရရင်တော့ အိပ်လို့ရ/မရ မသိဘူး..
ခုထိတော့ မိန်းကလေးသူငယ်ချင်း ချင်း၊ အမေနဲ့ညီမတို့နဲ့တောင် နှစ်ယောက်မအိပ်တတ်ဘူး...း(
Moe Cho Thinn - 6/22/09, 4:03 PM
တို့ကတော့ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဒ်တွေ သွေးကြောပိတ်ပြီး ကြွေမှာတွေတော့ မသိပါဘူး ကိုအန်ဒီ။
အနည်းဆုံးတော့ သူ စောင်ခြုံပေးမှ အိပ်တတ်တာပါ။ မေတ္တာခြုံပေးတာလို့ ပြောပြီးမှ အိပ်ပျော်တတ်လို့ပါလေ..။ :)
Anonymous - 6/22/09, 5:55 PM
အချစ်အတွက် အသက်ပင်သေသေ ဖတ်အိပ်မှာပဲ...
လက်ဖြတ်၇င်လည်း ဖြတ်၇ပါလေ့စေ ခေါင်းအုံးလုပ်အိပ်မှာ...
sawphonelu - 6/22/09, 10:58 PM
အောင် မ ငြီး ၊ ခေါင်း စဉ် ကြည့် ပြီး အူယားဖားယား ကြည့် လိုက်တာ ၊ ဘာ မှ လဲ မပါ ဘူး ။
khin oo may - 6/23/09, 12:51 AM
အေးလေ. version ပြန်မလို့ဥစ္စာ.
Anonymous - 6/23/09, 2:39 AM
မမလှထုံရေ..ရန်ကုန်မှာရော စောင်ခြုံပေးမှ အိပ်တတ်တာပဲလားဟင်
မီယာ - 6/23/09, 6:49 AM
နှစ်ယောက် ဖက်အိပ်တာ ရုပ်ရှင်ထဲမှာပဲ ရှိမယ်ထင်တယ်။ သူတို့က ၂မိနစ်လောက် သရုပ်ဆောင်ရတာကိုး။
Anonymous - 6/23/09, 6:56 AM
the whole story tells that you want sleep seperately. what is next?
Andy Myint - 6/23/09, 8:00 AM
Dear reader, don't take it personal. This blog is just for entertainment. For the record, I didn't mention not to hug your or my partner. I just said that we couldn't sleep up all night hugging each other. Have fun.
Andy Myint - 6/23/09, 11:26 AM
ဘာမှ မတတ်နိုင်ပါဘူး sin dan lar :(
တစ်အုပ်လုံး ပြန်မရိုက်နိုင်လို့ ဒီလိုပဲ ခေါင်းစဉ်လေး ယူပြီး လုပ်စားကြည့်တာ မဆိုပါဘူး.. Mr DBA
လူပျိုလေး Phyo Maw လည်း မသိသေးပဲကိုး…
အဲဒါမှ ဒီစာမျိုးရေးတဲ့ ကျွန်တော်ပါ ရောပြီး “ဂေါက်” ခံရမှာ.. ကိုရင်နော်
ဂလို ဂလို ရှိတယ် ကုမ်ရာသီသူ
ကိုယ့်အပြောနဲ့ကိုယ် ပြန်အပတ်ခံရတာ မနုသွဲ့
မပူနဲ့ Shinlay… ကျွန်တော်တို့ ယောက်ျားတွေက ဒီလိုပဲ ယုံလောက်တဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေ ပေးတတ်ပါတယ်။
Heartmuseum ရဲ့ လှန့်ထှာဗျာ.. ကြားတော့ ကျွန်တော်သူငယ်ချင်း အညာသားကိုတောင် သတိရတယ်။ အဲ..အေး.. သိပ္ပံနည်းကျ အိမ်ထောင်သည်ဘ၀တဲ့
Je-zu-tum-ba-de for your comment, Ko Ko Maung…
ဒီလို ပြောတဲ့သူတွေပဲ ယောက်ျားရရင် ပြောင်းလဲသွားတတ်တာနော် မကူးကူး..
ဟီးဟီး ကျွန်တော့်ကိုတော့ သူက စောင်ခြုံပေးတယ် မချိုသင်း
အိပ်စေဗျာ.. စာဖတ်သူ .. ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်တွေ မကြောက်ရင်
ဟားဟား ကိုစောဘုန်းလူလည်း ပါတယ်ကိုး… ကျွန်တော် ခေါင်းစဉ်နဲ့ မြှားထားတာ။ ဘာတွေ မျှော်လင့်ထားလို့တုန်းဗျ
ဘာပြောလဲ လိုက်မမီဘူး မခင်ဦးမေ
မေတ္တာခြုံပေးလို့ကတော့ အိုက်ချင် အိုက်ပါလေ့စေ MM
ဒါပေါ့မီယာ ရုပ်ရှင်တွေကတော့ Romantic ဖြစ်အောင်ပေါ့.. အိမ်ထောင်မကျသေးတဲ့သူတွေ ခံစားပြီး ပျော်ပါစေ.. နောက်မှ သိမယ်
ရသာစုံ - 6/23/09, 1:53 PM
ဆေးပညာအရ ကြည့်ရင် သက်တောင့်သက်သာဖြစ်ဖို့က အဓိက
ချစ်တာ မချစ်တာက ဒုတိယ....
ကိုအန်ဒီ ဘာရေးရေး ဗဟုသုတရပါတယ်...
P.Ti - 6/23/09, 5:25 PM
ကျွန်တော်ကတော့ မသိသေးဘူး။ ဘယ်လိုအိပ်မယ်ဆိုတာတောင် စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်ရဦးမယ်.. အဟိ
sin dan lar - 6/23/09, 10:34 PM
အဟိ ကိုဖတ်ပြီး ထပ်ဟိချင်သွားတယ်... ကပီတိရယ်....။
မီးမီးချစ် - 6/26/09, 11:29 PM
မီးချစ် ကတော့ အိပ်လို့အသားလာထိရင် ကြိုက်ဘူး.. စောင်လဲ အသက်ရှူကျပ်ဖို့ မပြော နဲ့ယောက်ယောက် နဲ့ မနဲလုနေရတယ်..း)
rose of sharon - 6/28/09, 11:27 PM
ဂျာမုန်းဒန် - 7/2/09, 7:53 PM
Anonymous - 7/4/09, 12:48 PM
SO MANY SPACE BETWEEN HE AND ME..:p
sawphonelu - 7/12/09, 1:45 AM
အန်ဒီ ရေ ၊ တစ် ခု ခု တော့ လုပ် ပါ ဦး
ွှ့သောမတ်(စ်) - 7/27/09, 6:04 AM
ဟောက်တတ်လွန်းလို့ကလေးလည်းရလာရော ကုတင် ပေါကပါ ဆင်းပေးရပါတယ်..
ဒါပေမယ့် အချစ်တွေကတော့ ဘေးမရောက်သွားပါဘူး..
အားလုံးဟာ အခြေနေတွေ ကြောင့် ပြောင်းလဲပေးသင့်ပါတယ်..
ကျေးဇူး ကို အန်ဒီရေ...
Anonymous - 11/10/09, 7:50 PM
အဲဒါတွေက ဒီနေ့ ခေတ်ကြီးမှာ မဆန်းတော့တဲ့ နအဖ လူသတ်သမားကြီးလို့ လား ခင်ဗျာ။ ဒါတွေထက်အရေးကြီးတာ ယနေ့ ၈၉ နှစ်မြေက်
အမျိုးသားနေ့ကြီးလေဗျာ။